प्लुरोले क्यास मोबलाई तपाईंको स्थानीय खुद्रा व्यापारमा ल्याउँदैछ Martech Zone
प्लुरोले क्यास मोबलाई तपाईंको स्थानीय खुद्रा व्यापारमा ल्याउँदैछ
शुक्रबार, जनवरी 11, 2013 शुक्रबार, जनवरी 11, 2013 Douglas Karr
समूह छुट उद्योग मा केहि गम्भीर प्वालहरू भेट्टाइयो जुन अझै पार गरिएको छैन। ग्रुपन र लिभिSसोसायल प्रयोग गर्ने व्यवसायका उजुरीहरूले धेरै मुद्दाहरूलाई औंल्याएको छ:
आवश्यक छुटहरू यति ठाडो छन् कि यसले व्यवसायलाई चोट पुर्‍याउँछ।
छुटमा भुक्तान तुरून्त आउँदैन, गम्भीर क्यासफ्लो मुद्दाहरूको कारणले केही व्यवसायहरूलाई गाडिदिएका छन।
उपभोक्ताहरू जुन उनीहरूले आकर्षण गर्छन् विशेषका लागि बाहिर छन् र कहिल्यै फर्कदैनन्।
कम्पनीहरू आक्रामक भई सबै समय व्यापार बेच्न कोशिस गर्दैछन्।
Plurro समूहले यसको टाउकोमा डिस्काउंट मोडल पल्ट्यो। पहिले यो उपभोक्ताहरू हुन् जसले ड्राइभ ड्राइभ गर्दछन् नगद भीड। एक पटक तपाईंको साथीहरूको स्थल वा खुद्रा आउटलेटमा जानको लागि साइन अप गरेपछि, प्लुर्रोले व्यवसायलाई उनीहरूसँग कस्तो प्रकारको छुटको प्रस्ताव गर्दछ। Plurro नगद भीड देखापर्छ र आफ्नो मोबाइल टिकट देखाउन छ र छुट प्राप्त गर्न रिसेप राशि प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो व्यवसाय मालिक द्वारा प्रमाणित छ।
सबै टिकटहरू Plurro द्वारा जोडिएको छ र व्यापारले व्यवसायको लागि प्लुरोलाई%% शुल्क दिन्छ। यो एक उत्तम समाधान हो र माथिका प्रत्येक मुद्दालाई पार गर्दछ। पहिले, व्यवसाय तिनीहरू भाग लिन सक्छन् यदि तिनीहरूले चाहनुहुन्छ र छुट स्वत:। अर्को, तिनीहरू अगाडि भुक्तान हुनेछन् र त्यसपछि Plurro तिर्नुहोस्। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण, किनकि यो मित्र प्रणाली प्रयोग गरीरहेको छ… यो स्थलको बारेमा जति छ र राम्रो समयको रूपमा छ किनकि यो छुटको बारेमा छ। र अन्तमा, प्लुर्रोले कल गरिरहनुको एक मात्र कारण यो छ किनकि त्यहाँ पहिले नै नगद भीड कुर्दै छ!
यहाँ Plurro को एक सिंहावलोकन छ:
प्लुरो फेसबुकको साथ एकीकृत छ र तपाईंको साथीहरूलाई तपाईंको अर्को नगद समूहमा आमन्त्रित गर्न विभिन्न किसिमका विभिन्न तरिकाहरू तपाईंलाई अनुमति दिन्छ।
Plurro उत्तरी भर्जिनिया मा शुरू भयो र अब इंडियानापोलिस मा शुरू भयो। हामी यसलाई बाहिर जाँच्दैछौं - सामाजिक दृश्य ट्र्याकमा यहाँ स्थानीय रूपमा प्राप्त गर्नका लागि यो एक ठूलो बहाना हो! डाउनलोड गर्नुहोस् तपाईंको आईफोनमा प्लुरो - एन्ड्रोइड आउँदैछ।
टैग: नगद भीडसमूह छुटgrouponlivingsocialplurro
ग्राहक सर्वेक्षण बर्नआउट
सामाजिक, मोबाइल वर्ल्डमा सामग्री मार्केटिंग